बिहेको त्यो पहिलो रात ! जब उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन थालिन् – वास्तविक मनछुने कथा” – Sandesh munch
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ ०५, २०७७ समय: १२:१७:३४
केटी रुने भनेको बिवाहको दिन मात्र हो तर केटा हाँस्ने भनेको त्यही बिहेको दिन हो, बिवाह पछि रुनु मात्र पर्छ । ह्या हावा कुरा नगर केटा हो भनेर कारको सिसा लगाए ।
ता कि साथमा भएकी जीवन संगिनीलाई कुनै असर नपरोस भनेर । मनमा एउटा सोचाई आयो साथीहरुले भनेको । के साच्चै बिहे पछि रुनु पर्छ ? के बिवाह गरेका मानिसहरु साच्ची नै असन्तोस हुन्छन त ? के संसारका सारा मानिस बिहे पश्चात रुनु नै परेको छ त ?
झन दुबैको साथ मिले त संसार जिउन सजिलो हुन्छ भन्ने सुनेको थिए । जीवनसँगै जिउनी भनेर बाचा गरेपछि त दुबैले दुबैलाई sacrifice त गर्नु त पर्याे नि । त्यसपछि त गुरुजीले कुदाउनु भयो कार ।
उनी तिर हेरे उनी रोईरहेकी थिईन । उनी रोएको देखेर मलाई नै नरमाईलो लाग्यो । अगी सम्म सबैको अगाडि हासेँकी थिईन । म खुसी छु हजुरहरु नरुनु है रुन हुन्न म सधाको लागि टाढा भएकी त होइन भन्दै आफ्ना आमा बाबुलाई सम्झाएर खुसी हुँदै आएकी दुलई आमा बाबू छोपिनसाथ रुदै थिईन् ।
दिद र सानी बहिनी आएर एउटाले पानी र अर्काेले दियो लिएर हामीलाई घुम्न थाले । त्यसै गरि अर्काे पट्टि आयो छोरा बुहारी लिएर मैले छोरो पाएकी थिए र भन्दै रत्यौली घन्कीदै थियो ।
सबैको दुलई हेर्ने घुईचो थियो । बाहुबाजे देखिबाट चलेको रितिरिवाज रे बेहुलीले आफ्नता जनलाई ढोग गरेर साडी दिनुपर्ने रे । यो चलन मलाई कति मन परेन । मन परेन भनेर नि म के गर्न सक्थे बाबू आमा मान्दैन चलेको रितिरिवाज हो त्यैले भनेर हुन्छ भन्छन् ।